LG G Watch အားသွင်းစက်သည်၎င်း၏အသွင်အပြင်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါသည် Androidsis ပါ
LG G Watch သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာဘဲဤစမတ်နာရီအသစ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင် ၀ ယ်ယူသုံးစွဲသူများစွာသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်စမတ်နာရီအသစ်တစ်ခုနဲ့ထွက်လာတယ် အဖြစ်တင်ပြပါမည် LG က G စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ R ကို.
Android Wear အောက်ရှိဤစမတ်နာရီကိုသင်ရရှိသူများသည်အမြင်အာရုံဗေဒ၌ဤနေရာတွင်မရှိနိုင်ဘဲဤရှုထောင့်ကတိုးတက်လာနိုင်သည်ဟုသင်ထင်ခဲ့သော်လည်း၊ အားသွင်းကြိုးသည်အားသွင်းရုံနှင့်လုံလောက်သည်။ ဒါက သြစတေးလျက startup တစ်ယောက်ဘာတွေတွေးနေလဲ ဆစ်ဒနီမှ G Watch ၏စံအားသွင်းစက်ကို၎င်း၏ Moduul အားသွင်းအထိုင်တစ်ခုနှင့်လဲလှယ်လိုသူ Indiegogo အပေါ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး.
Indiegogo သည် kickstarter ကို၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လက်ဖြင့်ထမ်းဆောင်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် ရန်ပုံငွေ၏အခြေခံအဖြစ် ထုတ်ကုန်အသစ်များရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုစီးပွားဖြစ်ရောင်းချရန်ငွေကြေးအလုံအလောက်မရှိသောစွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များစွာအတွက်
ဤအဆိုပြုချက်အသစ်အတိုင်း အားသွင်းပေါက် ပုံအချို့တွင်သင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း LG G Watch အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျင်မြန်စွာဆွဲဆောင်နိုင်သောရှုထောင့်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
သတ္တုနှင့်အစိုင်အခဲသစ်သားတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစံအားသွင်းခုံကိုအသုံးပြုထားပြီးနာရီအားသွင်းနေစဉ်သင်မြင်နိုင်သည် G Watch ၏မျက်နှာပြင်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာအားလုံးကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်မရ။ သင်၏ဖက်ရှင်စမတ်နာရီ၏ရွေးချယ်ထားသောအရောင်နှင့်အညီအဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်နှစ်မျိုးရရှိနိုင်သောဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်
Indiegogo အတွက်ရည်ရွယ်သောစီမံကိန်းသစ် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ သာထို့ကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အလင်းရောင်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ဟုကတိပေးထားသောအရာဖြစ်သည်။ သင် Indiegogo တွင်ဤကမ်ပိန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၃၂.၆၀ ကိုထောက်ပံ့လိုလျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်ဖြင့် "ကန ဦး" ပုံစံရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ LG G Watch စမတ်နာရီအတွက်စွဲဆောင်မှုရှိပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအားသွင်းစနစ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G Watch အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော charger တစ်ခု
၅.၁၁ မီလီမီတာအထူရှိတဲ့ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးဖုန်း Gionee Elife S5.1